Biyyoonni Hedduun Biiyyi Isaanii Cufataatti Akka Turu Murteessan
Hindii, Ferensaayii fi Naayijeeriyaan biyyoota hedduu hoogganoonni isaanii faca’ina vaayiresii koronaa ittisuuf jecha yeroo biyyattiin cufataatti turtu dheeressan keessaa ti. Yeroo ammaa addunyaa irraa namoota miliyoona lama ta’antu vaayiresii Kanaan qabaman.
Muummichi ministeeraa Hindii Nareendraa Moodii lakkoobsi namoota vaayiresii koronaan qabaman biyya isaanii keessaa kuma 10,300 ol waan ta’eef guutummaan biyyattii hanga Caamsaa 3tti cufaatti turti jedhan.
Prezidaantiin Ferensaay Emaanu’el Maakroon Wixata galala ibsa TV irratti dhiyaachuun kennaniin Ferensaay hanga Caamsaa 11tti cufaatti turti jedhan. Yeroo kanatti maneen barnootaa deebisanii banamuu jalqabu jechuun angawoonni beeksisniiru.
New Ziilaand torbanneen sadii dura namoonni mana keessa akka turan ajjejje. Lammiiwwan new ziilaand irra hedduun yeroon itti gad ba’an amma akka hin ta’in ni hubatu guyyoota 20n darbaniif hojii gaarii namni martinuu hojjete gatii dhabsiisuu hin qabnu jechuu dhaan muummichi ministeeraa biyyattii jacinda Ardem beeksisaniiru.
US keessaa namoonni kuma 600 ta’an vaayiresii koronaan yoo qabaman kan akkaan dha’amte magaalaa New York.